Xildhibaan Daleys Xasan oo Baarlamaanka ka hor-sheegtay maanta in loo diiday inay ka dhoofto Garoonka Muqdishu – Kalfadhi
Xildhibaan Daleys Xasan oo Baarlamaanka ka hor-sheegtay maanta in loo diiday inay ka dhoofto Garoonka Muqdishu
November 25, 2019 November 25, 2019 Hassan Istiila
Xildhibaan Daleys Xasan Aadan oo kamid ah Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa kulanka Baarlamaanka ee maanta ka hor sheegtay in laga xanibay safar ay saaka ku tagi laheyd degmada Luuq ee Gobolka Gedo oo ah deegaan doorashadeeda.
Xildhibaannada ayaa sheegtay in safarkaasi ay ka hor-istaagtay Hey’adda Nabad-sugida Soomaaliya.
“Waxaan shalay oo aheyd Axad fasax weydiista guddoonka Baarlamaanka si aan ugu safro deegaan doorashadeyda. Waxaan aaday airport-ka Mogadishu, saacado kaddib ayaa waxaa la igu wargeliyay in airport-ka aan ka bixi karin, ayna i heysato Hay’adda Nabad-sugida iyo sirdoonka Qaranka”.
“Waxaan codsan lahaa in dambiga airport-ka iga yaalla ee aan ku bixi karin in loo keenno guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya, si dacwadaasi ay guddoonka u galaan”, ayey tiri.
Bishii Sept, Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku hakiyeen diyaarad usocotay magaalada Kismaayo oo uu ku safri lahaa madaxweynhii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Diyaarada ayaa loo diiday in ay ka duusho garoonka Muqdisgo xili ay duulimaadkeeda tooska uu ahaa magaalooyinka Kismaayo iyo Nayroobi.
Sheekh Shariif Sheelh Axmed ayaa waxa uu doonayay in uu ka qaybg galo caleemo saarka madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Madoobe.
Maxkamadda sare oo markale u fariisaneysa dhageysiga dacwadda u dhaxeysa Xisbiga Himilo Qaran iyo Hey’adda Duulista rayidka ah
Xildhibaannada Golaha Aqalka Sare oo akhrinta labaad marsiiyay Hindise sharciyeedka Hanti-dowrka guud ee Qaranka